दशैँको साइत सार्वजनिक, कुन दिन कुन समयमा के ? - Everest Dainik - News from Nepal
दशैँको साइत सार्वजनिक, कुन दिन कुन समयमा के ?
काठमाडौँ, असोज ६ । यस वर्षको दशैँको साइत सार्वजनिक भएको छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यसवर्ष असोज २४ गते नवरात्र आरम्भ हुने र त्यस दिन बिहान ७ बजेर १५ मिनेटमा घटस्थापनासहित जमरा राख्ने साइत परेको बताएको छ ।
असोज २५ गते बिहीबार बिहान १० बजेर २४ मिनेटमा झण्डा फेर्न शुभ हुने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । गौतमले झण्डा फेर्दा पश्चिम फर्केर फेर्नुपर्ने बताए ।
याे पनि पढ्नुस भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक
असोज २८ गते आइतबार पचली भैरव यात्रा परेको र असोज ३० गते मङ्गलबार फूलपाती भित्र्याइने दिन परेको छ । त्यसैदिन बिहान ९ बजेर २१ मिनेटमा तुलजा भवानीको यात्रा गराइन्छ । तुलजा भवानीलाई असनमा राख्ने साइत त्यसैदिन अर्थात असोज ३० गते मङ्गलबार १० बजेर २ मिनेटमा परेको छ ।
असोज ३१ गते बुधबार महाअष्टमी, कार्तिक १ गते बिहीबार महानवमी, कार्तिक २ गते शुक्रबार विजयादशमी अर्थात् दशैँको टीका परेको छ । विजयादशमीका दिन बिहान ९ बजेर ३९ मिनेटमा देवी विसर्जनको साइत निस्किएको छ । देवीको प्रसाद लगाउन साइत खोज्नेका लागि बिहान ९ बजेर ५१ मिनेटको साइत दिइएको अध्यक्ष प्रा डा गौतमले बताएका छन् ।
विजयादशमीकै दिन बिहान ८.३५ मा तुलजा भवानीको यात्रा गराइनेछ । भवानीलाई बिहान ९ बजेर ४४ मिनेटमा स्थिर आसनमा राखिनेछ । कार्तिक ६ गते मङ्गलबार सबै बलि पूर्ति गरी जमरा सेलाइनेछ ।
कात्तिक ७ गते बुधबार कोजाग्रत पूर्णिमा व्रत मनाएपछि नेपाली हिन्दुहरूको महान् चाड बडादशैँ समापन हुनेछ ।
ट्याग्स: दशैँ २०७५, शुभ साइत